Ra'isul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo geeriyooday - Caasimada Online
Home Warar Ra’isul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo geeriyooday
Ra’isul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo geeriyooday
Istanbul (Caasimadda Online) – Ra’isu lwasaarihii hore ee Soomaaliya ee dowladdii KMG ahayd Xasan Abshir Faarax ayaa maanta ku geeriyooday dalka Turkiga sida ay xaqiijiyeen qaar ka tirsan eheladiisa.
Allaha u naxariistee Xasan Abshir ayaa muddooyinkii dambe ku xanuunsanayey dalka Turkiga halkaas oo uu ugu dambeyn maanta ku geeriyooday.
Xasan Abshir ayaa Ra’isul wasaare kasoo noqday Dowladdii uu hoggaaminayey madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan.
Ra’iisul Wasaare xasan Cali Kheyre oo soo saaray qoraal tacsi ah ayaa yiri “Waxaan tacsi u dirayaa ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka baxay Ra’iisul Wasarihii hore ee dalka Xasan Abshir Faarax. Waxa uu kaalin muhiim ah ka soo qaatay dib-u-dhiska dalkeena. Waxaan Alle uga baryayaa inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo, innagana uu samir naga siiyo.”
Xalay aheyd markii uu Magaalada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya uu sidoo kale ku geeriyooday Maxamed Cabdi Xaashi oo ahaa Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland, isla markaana kamid ahaa asaasayaashii dowlad Goboleedka Puntland.